Ilahay swt miyuu samada kowaad usoo dagaa mise raxmadiisa ayaa soo dagta? – Hoyga Barashada & Faafinta Diinta Islaamka, Kaalmaynta Dadka Raba inay Cilmiga diiniga ah Bartaan
Magaca alle ayaan ku bilaweyna nabad gelyo iyo naxariis allaha yeelo xabibkena muxamed scw intaa kadib .
Xadithka oranaya “ilahay swt waxuu usoo daga samada kowad(raxmadisa ayaa soo dageysa ) markas buu dhahaya war yaa wax i weydisanaya ee aan siya oo yaa i baryaya ee aan ajiiba ”
Xadithka waa mid saxiixa ah sugnashinhisana la isku heysan lakin waa in la dhaha allah raxmadiisa ayaa soo dagta ee an la oran ilahay ayaa soo daga .
Waxyaabaha aan ilahay uqalmin waxaa ka mida in loo nisbeeyo makaan ama sugnasho maxa yelay makhluqa ayaa marba meel ukaca lehna shugnasho ama meel lagu nagaado ilahay swt wax la mida ma jiraan marka meshasi waxa ka imanaya shabah maxaa yelay makhluqisa ayuu shabahaya taasna wuu ka nasahanyahay swt allah quranku wuu noogu cadeyay marar badan ineysan jirin wax la mida .
Ilahay swt makan uma sugnan iyo meel lagu nagaado ilahay carshigisa ayuu ka sareeya waxuuna ahaday meshu aha intuusan abuurin dhul , cir, iyo carshiwa dadka dhahaya ilahay samada ayuu jiraan haka waantoban arintaa wa nusqaan allahna wuu ka nasahanayahay waxaaso dhan . ilahay waxuu jiray samada horteed carshiga hortiis dunidaan oo dhan horteed intaasi ayado eeysan jirin meshuu ahaday ayuu ahaday wuuna ahaan doona meshuu yahay intaasi markeey baba,aan sidaa ayaa ah caqidada toosan
axkaam, Maqaalo, Muxaadaro qoraal, radin shubuhaat